Jump Bottom to up arrow ​ဘယ်​လို​ထည့်​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Jump Bottom to up arrow ​ဘယ်​လို​ထည့်​မ​လဲ
​နေ​မျိုး: ​အ​ပေါ်​သို့ ​ဆို​တဲ့ ​မြှား​လေး​ထည့် ​နည်း​လေး ​သင်​ပေး​ပါ​နော်
​ကျွန်​တော်​သိ​တာ​လေး​ကို ​ဝေ​မျှ​လိုက်​ပါ​တယ် ..
(၂) ​အောက်​မှာ​ရေး​ထား​တဲ့ code ​ကို ​သွား​ထည့်​လိုက်​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ် ..
​အောက်​မှာ​လဲ ​မျှား​ပုံ​တွေ​ပါ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အ​ခု​မျှား​ပုံ​ကို ​မ​ကြိုက်​ကြ​ရင်​လဲ ​တစ်​ခြား​မျှား​တွေ​ကို ​ပြောင်း​သုံး​လို့​ရ​အောင်​လို့ ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ .. ​ကို​ကြိုက်​တဲ့​မျှား​ကို ​ရွေး​ပြီး www.picoodle.com ​မှာ ​အ​ကောင့်​လုပ်​ပြီး​တော့ ​တင်​လိုက်​ပါ . ​လင့်​တွေ​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​အဲ့​ဒီ့​အ​ထဲ​က​နေ Direct link ​ရဲ့​လိပ်​စာ​ကို​ယူ​ပြီး ​အောက်​မှာ ​အ​နီ​ပြ​ထား​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ပြောင်း​လိုက်​ရ​မှာ​ပါ ..
<a style="display:scroll;position:fixed;bottom:5px;right:5px;" href="#" title="​အ​ပေါ်​သို့ "><img src="http://img30.imagefra.me/img/img30/2/8/3/nyinaymin/f_a8o03y0w85im_e996312.png"/></a>
Download ifile.it (​မြှား​ပုံ​စံ​တွေ ​လို​ချင်​သူ​များ​အ​တွက်​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ)
maimai December 26, 2009 at 1:08 AM
​အ​ကြီး​ကြီး​ဖြစ်​နေ​တယ်..​ပြီး​တော့ ​အ​ပေါ်​သို့ ​ဆို​တဲ့​နာ​မည်​ကို​လည်း ​စိတ်​ကြိုက်​ပြောင်း​ကြည့်​တယ် ​မ​ရ​ဘူး။ ​အ​ပေါ်​သို့ ​ပဲ​ပြ​နေ​တယ်..​အဲ​ဒါ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မှာ​လဲ​ဆို​တာ ​ညွှန်​ပြ​ပေး​ပါ​အုံး​ကို​ညီ​နေ​မင်း။